China si egwuregwu ụlọ ọrụ booming dị ka investors achọ ọhụrụ emeghe ụzọ maka ibu - China Tianjin Shengxin Sports ngwongwo
Ukpono & Certifications
ime ụlọ Fitness
China si egwuregwu ụlọ ọrụ booming dị ka investors achọ ọhụrụ emeghe ụzọ maka ibu
Fuzhou - Idebe elu a ụda na otu ebe ijeụkwụ nke mmepe, na Chinese sports ụlọ ọrụ na-booming ke 2016 dị ka investors gbalịrị ekpuchi a wider nso nke azụmahịa, mgbe achọta ọhụrụ engines ụgbọala ibu.
Policy na-abara ụlọ ọrụ
China si State Council agbala a akwụkwọ na 2014 iduzi mmepe nke egwuregwu na ụlọ ọrụ na-akwalite egwuregwu oriri. Ọ dịghị 46 faịlụ a na-ewere dị ka ndị milestone nke ụlọ na-arị elu akụkọ ihe mere eme.
Provincial atumatu, dabeere na mba akwụkwọ, e wepụtara n'oge 2015 na dị iche iche n'ógbè, na ndị ọzọ kpọmkwem ihe e weere na obodo na-asị etoju.
The General Administration nke Sport bipụtara nke 13 afọ ise atụmatụ na egwuregwu ụlọ ọrụ a July, na ụfọdụ 22 ọzọ satellite akwụkwọ na-akwado atụmatụ. Akwụkwọ ndị a na-akọwa na ndị sports ụlọ ọrụ ga-akarị 3 puku ijeri yuan ($ 432 ijeri) na-erule afọ 2020. The ụlọ kwukwara uru na-atụ anya ka kụrụ otu percent nke GDP, na egwuregwu oriri na-atụ anya ka kụrụ 2,5 percent nke disposable ego kwa n'isi n'isi site mgbe .
The National Fitness Program (2016-2020) na Healthy China Guputa (2030) na-agbala afọ a na-enye doro anya ntụziaka maka a mba atụmatụ nke ụmụ amaala 'mma na ahụ ike na wider sports ụlọ ọrụ dị ka nke ọma.
The State Council kọwakwara nsogbu na ọnọdụ ghar nke mma na ntụrụndụ na egwuregwu ụlọ ọrụ, na-na ntụziaka dị ka isi ihe aga-eme n'ihu ya mba ụkpụrụ nduzi agbala a October.
Ke adianade do, General Administration nke Egwuregwu, jikotara aka wee na ọtụtụ ndị ọzọ na mba ndị ọchịchị ngalaba, bipụtara atumatu na atụmatụ a afọ na oyi egwuregwu, mmiri egwuregwu, aero egwuregwu, ugwu ugwu n'èzí egwuregwu na omume ndị ọzọ.
Ndị a atumatu na metụtara egwuregwu ụlọ ọrụ na-adịghị mere gbaa na ọchịchịrị; ha n'otu oge ahụ ezi uche, bara uru na ebe. Ha ẹkenịm a ụzọ map maka mmepe nke Chinese sports ụlọ ọrụ na-abịa afọ.
Egwu ala n'elu IP, ego wee wider
Na a n'ụzọ eti iche n'ụwa niile zuo tide hụrụ afọ gara aga, Chinese sports investors yiri malitere eme anya akpachapuru anya nke na 2016 na-achọ a ụzọ ka mma nke na-azụ ahịa.
China si retail ibu Suning Group ka enwetara a 70 percent eto na Italian football club Inter Milan, a ndibiat uru 270 nde euro ($ 282 nde), ikekwe nnukwu mpempe ozi ọma pụta nke egwuregwu na ụlọ ọrụ nke afọ a.
Ka ọ dịgodị, na-esiwanye nnukwu chunks nke isi obodo na-shifting ndị ụlọ ọrụ ahụ na-elekwasị anya na-akwọ ụgbọala elu ahịa uru nke egwuregwu n'atụmatụ.
China si premiere ịkparịta ụka n'Ịntanet ụlọ ọrụ Tencent aka a nkwekọrịta na FIBA, na-aghọ ya n'elu ibe maka ọzọ afọ itoolu. The imekọ ihe ọnụ n'etiti FIBA ​​na Tencent ga-ebe ke ubi nke mmadụ ịkparịta ụka n'Ịntanet, online ịkwụ ụgwọ, online gụgharia na e-azụmahịa.
The akporo nke imekọ ihe ọnụ bụ na-amụbawanye amụbawanye. Chinese ezigbo ala ibu Wanda Group eguzobewo nanị mmekorita ya na FIBA ​​maka a zuru ụwa ọnụ na nkwado, gụnyere ire nke ikikere ikike na zuru ụwa ọnụ ahịa ikike maka oge nke anọ basketball World iko, na 2033.
Mmekọrịta na-agbawa okooko na anụ ụlọ n'ihu dị ka mma. Chinese e-azụmahịa ike Ali Sports ada n'elu nanị TV ikike Cuba (Chinese University Nkata Association). Online video ụlọ ọrụ Oké Ifufe Sports gbasaa ya azụmahịa na-agụnye CBA (Chinese Nkata Association) ndụ na agbasa ozi n'ikuku. Ọ na-atụ anya na mpi maka CBA si TV ikike ga-abụ nnọọ ihe siri ike na-eme ihe ike na 2017, mgbe CBA webatara ya ụlọ ọrụ na afọ a.
Wanda Group ga-otu na-Chinese Football Association ịhazi China Cup bọl ndorondoro na 2017, na-ekwe nkwa iji mee ka ọ a maara nke ọma kwadoro n'ọdịnihu. Ka ọ dịgodị Suning otu mere a nnukwu ulo oru mbo ke ịzụta TV ikike maka English Premiere League, na Ti'ao Dongli, ikike ịgụ maka Chinese Super League (CSL) eguzobewo ya TV na agbasa ozi n'ikuku center.
Na mgbakwunye na IP azụmahịa, sports investments gara a wider nso nke ebe gafee ụlọ ọrụ. Dị ka a nnyocha akwụkwọ na egwuregwu ego na ego site onwe ha gị n'ụlọnga Sports Bank, ego lara omume maka stadiums ọrụ, egwuregwu ahịa, egwuregwu media, bodybuilding, azụ ahụ na egwuregwu njem. Mgbe emeri ego, ọtụtụ azụmahịa startups na-agbalịsi maka n'ihu mmepe site nzute bụ isi ihe ịma aka nke na-emeri ihe na-eji ọkụ.
Zhong Bingshu, headmaster na Capital University of Physical Education na Sports, gwara Xinhua na nnukwu isi mmalite nke isi obodo ndị agụụ na-agụ maka yiri nnukwu aha na klọb na-etolite mmekọrịta na, ma na-ahụ a afọ-on-afọ nnofega ke ahịa omume.
"A nnukwu ego nke isi obodo efehe n'ime egwuregwu ụlọ ọrụ, karịsịa na ebe nke egwuregwu ihe na mmekọrịta na ama klọb na 2015. Nke a na-emekarị ka kwụsịlata 2016. The investors na-na-ọzọ ò na ha na-eche banyere ịkpata ego. Ke adianade Sporting ihe, e nwere ihe dị ukwuu nke ahịa nwere na mma na ntụrụndụ na egwuregwu, "Zhong hụrụ.
'Sports +' aku na uba
Cross-ụlọ ọrụ mwekota bụ otu n'ime ndị kasị doro anya na atụmatụ nke Chinese sports ụlọ ọrụ na amụbawo ahịa n'ime ubi nke njem, omenala, agụmakwụkwọ, nlekọta ahụ ike, na-elekọta mmadụ ịkparịta ụka n'Ịntanet. Mmepe nke wider ụlọ ọrụ agaghịkwa hiwere isi gburugburu dị nnọọ ihe ndị ha; ọhụrụ ebe nke nwere ibu na-asaghe elu ọhụrụ, ohere. A-emeghe ụzọ maka cross-ụlọ ọrụ imekọ ihe ọnụ na-mara dị ka 'sports +' ohere.
Were sports + njem dị ka otu n'ime ha. 3.38 nde mmadụ aka na ụfọdụ 311 egwuregwu si Jan na April afọ a, na-ewe a ngụkọta nke ruwo 11.9 ijeri yuan ($ 1.7 ijeri) na okporo ụzọ, nkwukọrịta, hotels, isi nri, na ọrụ ndị ọzọ.
Official CSL data-egosi na nkezi na-ege ntị size kwa game a oge bụ 2,000 karịa na 2015. Ke adianade elele egwuregwu ndụ, ihe na ọzọ Fans na-ekiri egwuregwu site na internet. Ahụ ihe ndị yiri na-idem ke basketball, volleyball na table tennis.
The 'sports +' azụmahịa dịkwa mkpa iji merie ya n'erughị eru na nke a n'oge ogbo nke ya mmepe. Ọtụtụ egwuregwu na ụlọ ọrụ ndị na-enweghị ike na-enwe preferential tax atumatu na ụfọdụ obodo iwu na ụkpụrụ na-lag anya n'azụ mmepe nke ụlọ ọrụ.
Sports mkpakọrịta, ndị ọtụtụ n'ime ha na-a gbanwee na mere n'ime ndị na-abụghị ndị ọchịchị akụkụ, nwere a na-adịghị ike aka na-egwu na-emepe emepe na ụlọ ọrụ. Ka ọ dịgodị, a enweghị sports akụrụngwa bụ ka a nnukwu nsogbu na ọtụtụ ndị na obodo.
Na-aga n'ihu, ụlọ ọrụ ọkachamara na-ekwu na egwuregwu azụmahịa, dị ka a ọhụrụ kpakpando ututu na China aku na uba, na-achọ ndidi na omume asian site isi ahịa nnyocha kama nke ịgba chaa chaa na nnukwu ichekwa ego na search of ngwa ngwa ịga nke ọma na ozugbo uru.
Post oge: Jul-26-2018
Shengtang International lọjistik Park, Tangguantun Town, Jinghai District, Tianjin, China